Aqoondarro Waa u Nacab Jacayl 7 – Garanuug
Home / Buug / Aqoondarro Waa u Nacab Jacayl 7
Faarax Maxamed Jaamac Cawl August 10, 2016	Buug, Sheeko Faneed Leave a comment 5,209 Views
Waxaa dhacday markuu soddoggiis warqaddii jeexay oo weertii u horraysey oo ahayd “Calimaax sidii johoradeed yaanan ku jamane” isha mariyey, mar labaadkiina ilaa erayadii u danbeeyey oo ahaa Cawrala Barre akhriyey, oy u muuqatay inay warqaaddu ku saabsan tahay jacayl ka dhexeeya Calimaax iyo ruuxaas dumarka ah, ayaa hoosiis dhex maray warqaaddii iyo indhihiisi oo uu mar saddexaadkii naxdin iyo yaxyax daraadood dib eray uga kicin waayey. Halkaasuu isagoo didsan soddogii ugu celiyey warqaaddii Calimaax iyadoo isku guda jirta. Calimaax waxay la noqotay in odaygii soddogiisa ahaa indha dareeyey oo uu sidaas aawadeed warqaaddii u akhriyi kari waayey. Markaasuu intuu warqaaddii ka qabtay soddogiis u dhiibay ninkii dhinaciisa bidix fadhiyey, oo ayaandarro labaad ahaa seeddigii Wacays.
Wacays warqaaddii buu intuu galka ka saaray oo kala bixiyey beeg isu hor qabtay, isagoo xoogaa dareeni galay markuu aabbihii wejigiisa eegay dhididka saarsaaran. Sidii si le’eg Wacays bilawgiiba wuxuu la kulmay wax aanu filayn oo aad uga yaabiyey, waana ka bogtay warqaaddii isagoo aan weli eray uga sheegin Calimaax. Calimaax baa haddaba, dareemay inay warqaadda wax walaac geliyey soddogiis iyo seeddigiis ku qoran yihiin oo lagula dhici waayey ama lagala xishooday in loo sheego. Markaasuu ku yiri “Wacays ii sheeg waxa warqaadda ku qoran, yaase soo diray?” Wacays baa markaas u jawaaboo ku yiri, Calimaax waxa warqaadda ku yaal iyo cidda soo dirtay midna halkan kuugu sheegi maayo Soomaaliduna waxay ku maahmaahdaa “shir looma wada uunsiyo” ee waa inoo markaynu shirka ka dareerno.
Calimaax waa af gartay Wacays oo shirkii buu iska dhegeystey isagoo walaacsan oo ka fekeraaya waxa warqaadda ku qoran. Nasiib wanaag, in yar dabadeed ayaa shirkii ninkii guddoonshaha ka ahaa xiray oo gartii dhammeeyey.
Sidii ballanku ahaa markii la dareeray ayaa Calimaax iyo Wacays is raaceen, oo haddii in yar la wada socdey Calimaax yiri, “Wacays ina keen guriga aad warqaadda iigu akhridide.” Wacays baa markaas ku jawaabay, “Caliyow tanu mid gurigaagan laguugu akhriyaayo ma’ahee cidladaas inoo leexi.” Cidladay u leexdeen ayaa Wacays warqaaddii u akhriyey Calimaax.
Calimaax markuu tixdii u horraysey ee warqaadda ku tiillay maqlay ayuu afka gacanta saaray oo hareerihiisii deydeyey in cid kale dhegeysanayso. Hadduu amminkiiba gartay in waxa meesha ku yaal uu jacayl yahay asaanay ku habboonayn in seeddigiis u akhriyo, ayuu yiri, “bes! Wacaysow waa kaa dhantahay.” Wacays dheg uma dhigine warqaaddii buu ilaa dabo ilaa dacal akhriyey, markuu dhammeeyeyna intuu galkeedii ku celiyey buu jeebka shaarka ugu ridey oo ku yiri “Calimaaxoow maanta ka dib waxaasoo kale xididka hawla iman, haddii kale xaal gola jog ah baa ku qabanaaya.” Calimaax baa markaas yiri “hadduuba I hayaa oo ay tahay adigu aad joogtide inaan soddoggii xaal degdeg ah oo hoos ahaan ah siiyo.” “Aday ku jirtaa” baa Wacays ku yiri, “waayo adoo kale wax looma sheego.” Calimaax baa markaas yiri, “Wacaysow kuguma raacsani inaan anoo kale wax loo sheegi karin, waayo waxaa ii muuqata inay wax akhri iyo wax qoris la’aantu yihiin jaahilnimo weyn oo doqonnimo iyo dullinimo ku jirto. Waxaa kaloo ii muuqday maanta inay jaahilnimadu tahay gudcur iyo mugdi kaa daaha ifka iyo adduunkaba, oo dullinimo kalena aanay jirin iyada ma’ahee. Waxaa kaloo ii raaca intaa oo aan shaki ku jirin in nin kasta oo karti iyo raganimo u dhashay ay raganimadiisu dhaliilan tahay kalana dhantaalan tahay mar hadduu jaahil yahay, waxaana ii marag ah danqaarihii, ceebtii iyo nacasnimadii maanta xididka hortiisa iga raacday. Waxaanna ku leeyahay Wacaysow ninkii waaya arag ah waxbaa lagala haraaye i maqal oo weertaydan waanada ah ha sii deyn.”
Wacaysow nimaan wax akhriyeyn, waafi noqon waaye,
Weeraartan madan loo fadhiyey, wadhi ka raacdaaye,
Warkiisiyo sirtiisoo dhan baa uunku weriyaaye,
Sidayduu u wiiqmaa haddana, sharaf ku waayaaye,
Sidayduu waraabaha wahtami, wax uga roonayne,
Sidayday wadartiyo yasaan, xididka waayeele,
Waanigaa waxaan warac ahaa, wegetan liicaaya,
Oo way iyo wayey wanigaa, wahantan weydooday,
Oo wax aqoon la’aantay gu wacan, inaan wadeecoobo,
Hadduu waagu nabad ii beryaan, la’I weldaamaynin
Eebbe waaxid weeyee, haddaan wed iga soo gaarin,
Wawgiyo higgaaddaan ka baran, berry wadaadkiye,
Wallaahaan ku dhaartiyo Ilaahii Waaxidka ahaaye,
Culimada wareegtaan ku oran, weylun ii dhiga’e,
Wahsanmaayo jeeraan akhriyo, weedh la soo diraye,
Waxes waanaday tahay haddaan, waaya aragoobey,
Oo aan waraaqihii jacayl, weer ka kicin waayey,
Wax bartaay wax garab baa adduun, berri la weydiine.”
Markuu Calimaax dhammeeyey gabaygaas uu ku tusaalaynaayey seedigiis jaahilnimadu fool xumada iyo dullinimada ay u leedahay dadka uu kuna ballan qaaday inuu aroortii waxbarasho bilaabayo, ayuu ku yiri seeddigiis “Wacaysow odaygii intaanaan isu iman xaal hoos ahaana iga sii gaarsii.”
Wacays baa markaas Calimaax ku yiri “waa tahaye, illayn innaga waxba innooma kala qarsoonee, oo rag isku ayniyaynu nahaye maad xaalka iiga warrantid.” Calimaax wuxuu ku jawaabay “waa runtaa Wacaysow Soomaalidu waxay tiraahdaa, nin qoyani biyo iskama dhawro, balse hadda waan siyaysanahaye mar kale haynoo ahaato oo inna keen hadhimo tagnee.” Halkaasaa lays raacay iyagoo aan ninna nin la hadlayn labadoodii ilaa ay tageen gurigii Calimaax oo halkaas lagu wada qadeeyey, isagoo haasaawihii iyo hadalkii Calimaax aad ugu yaraaday.
Siduu Calimaax ku ballan qaaday inuu waxbarto oo aan warqad dambe loogu akhriyin ayuu markii waagii beryey macallinkii dugsiga Xarunta u tegey oo inta loox la siiyey loo bilaabay alif, ba, ta, ja, xa, mudda yar dabadeedna wuxuu gaarey heer fiican oo uu waraaqihiisa ku akhrisan karo.
Iyadoo Cawrali war iyo wacaaltoona ka weydey in Calimaax warqaaddii gaartay, hadday gaartayna waxay gayeysiisey ama badday, ayey had iyo jeer nafteeda ku samirsiin jirtey inay haddaanay maanta war ka helin, ay ka heli doonto berry ama saadambe ama saakuub. Nasiib darrise waxaa dhacday wax war ahi waa ka soo noqon waayey Calimaax, Cawralana jacaylkeedii qarsoodigii waa ka baxay oo dadkii magaalada degganaa oo dhan ayuu ku baahay ilaa labadeedii waalid iyo walaalaheedba ogaadeen.
Markii saas loo ogaaday ayaa maalintii dambe iyagoo walaalkeed Dalmar iyo hooyadeed fadhiyaan aabbeheed u yeeray oo ku yiri “Cawralaay aabbe waa maxay waxa lagugu sheegsheegayaa miyaananse kuugu ducayn ninka la yiraahdo Geelle oo laba boqol oo geela leh, sidee baad jacayl iyo wax xille ula timaaddaa oo lagaaga maqlaa. Waxaan ku leeyahay maanta ka dib waxaas iyo wax la mid ah yaanan kaa maqlin haddii kalese dayraad iga tahay ee ogow. Waayo anigu waxaan ahay nin xishoonaaya oo aan oggolayn in markaan golayaasha tago in lay yiraahdo waa kii gabartiisu ninka jeclaatay. Ugu dambaystii waxaan ku leeyahay waa geeri baabi’inaysa gurigeenna, haddii waxaas dadku inna ku maqlo ee iska jir maanta ka dib oo yaan lagaa maqal.”
Haddii odaygii dhammeeyey hadalkiisii ayaa hooyadeed qaadatay hadalkii oo tiri “heedhee, gabadha Cawrala waan ka goblamay waana layna ka beddeshay oo iyadii ma’aha, waayo waa xishoon jirtey, balse maxaa annaga iyo jacayl isu kaaya keenay, weligey waa kaas aabbahaaye ma oran waan ku jeclahay, anigu afkayga ma soo marin karo eraygaas baase, oo! oo! oo! Waa waarey gabadhani waxbay la timid oo baddii baas baa laga soo raacay.”
Markay labadii waalid dhammaysteen canaantoodii ayey isaga tageen Dalmar iyo Cawrala iyadoo ilmadu ka tililikh leedahay labada indhood. Walaalkeed Dalmar baa markaas ku yiri “Cawralaay wax xun baad samaysey oo dhegtayadii baad dishey oo haddaadba nin aan dalka joogin oo meeshaas iyo Taleex jira u baaqday, haddaba waxaan ku leeyahay miyaadan maqal in aabbeheen loogu ballan qaaday boqol geela oo baarqabkoodii ku doobinaayo iyo wax alla wuxuu doono oo yarad ah.
Haddabam ha nacasoobin oo hanna jabin oo hanna waasiin xoolahaas aanu qaarkood gabbaati u sii qaadannay kaliishii dhoweyd. Midse waan kuugu garaabayaa oo waxay tahay ninkii badda kaa soo saaray wax loo abaalgudo waa yahay, hase ahaatee ninka hadda Xarunta iyo Taleex jiraa muxuu kaa ogyahay, iska illow oo danahaaga ka raac. Tu kale waxaan maqlay inaad gabaydide bal anna i maqal waxa ku hayaan weer ka oranayaaye.
Cawrala Barraay Calimaax, calan laguu saarye,
Wuxuu kaaga cararayba, waa cabashadaadiiye,
Cureejaa laguu dhigi lahaa, kun iyo caycayne,
Cood baa laguu dhaqi lahaayoo, ma caddilaanteene,
Cayaaraa laguu tumi lahaa, cis iyo maamuuse,
Cawadaada eed wadigii, been cawaansadaye,
Cawralaa markaas ku tiri walaalkeed “horta Dalmaroow adigaa iiga dhow aabbe iyo hooyo oo aad moodda inaad in yar garasho u leedahay jacaylkan i haya, balse inta kaa dhimanna aan kaa dhaadhiciyee i dhegayso.
Dalmarow warkaagii dabeebtaadi heesaha
I durtoo i damaqdoo
Doqoni sokeeyiyo dulmar hadala seegtoo
Dacalkiyo agteedaa loo dalag dhigaayoo
Anse daaqsin geel baad iigu dabartay maansada
Wuxuu hadal dux leeyahay daliilkiisa sheegtaye
Bal wax kaa dahsoonaa aan debinta saaree
Ha u qaadan deelqaaf
Waa doog jacayloo waa dab iyo naaroo
Waa danab sidiisoo waa walax dadyahanoo
Waa dabaylo gaaroo anna ma doonan heedhee
Dar alluu ka yimiyoo malag duulayaa siday
Isagaygu duraayoo i dul keenay maandhow
ma dow baa walaalow inaad igu dagaashaa?
Duunyo layga doortaa urug aan deddoodaa
Waa danab sidiisoo waa wax dayahanoo
Waa dabaylo gaaroo diirkiyo laftuu xulay
Beerkuu dalooshaday feeraha dareersani
Wey wada damqanayaan darbaddiyo xanuunkaan
Haddii deeq laguu dhigo damcaddeed saluug tahay
In kastay dulbaaxiyo darib saafi ay tahay
Ogoobay dul hoos uurka uma degaysoo
Waa dacar qaraaroo waa timirta doocaan
Waa dabayla gaaroo dawadiisa waayeye
Ma aroos daadduucaan dullinimo u yeelaa?
Mise daad i qaadyey duurgal baan ahaadaa?
Dugaaggaa habqamayiyo deeradaan la dersaa
Ma duulaaye Mariskaan i daadahee iraahdaa?
Diirad buu wataayoo dalkuu waayo tegey baan
Ii dawi iraahdaa?
Daayinow Allahayow Adaa daa’imaayee
Inta dunida maanta ah dabiibkay na kulansii.
 Shimbirka Mariska la yiraahdaa waa shimbirka dadka u horkaca meel uu malab ku soo arkay, ama meel libaax fadhiyo.
La Soco Qaybta 8d
aqoondarro waa u nacab jacayl buug calimaax Calimaax&Cawrala cawl cawrala Faarax maxamed jaamac cawl jacayl sheeko faneed	2016-08-10
Previous Raage (Saturn)
Next Aqoondarro Waa u Nacab Jacayl 8